Izitayela zocansi - Wikipedia
Isikhundla sobulili yisikhundla somzimba abantu abasisebenzisela ukuya ocansini noma eminye imisebenzi yezocansi. Izenzo zocansi zivame ukuchazwa yizikhundla abahlanganyeli abazithathayo ukuze benze lezo zenzo. Yize ukuya ocansini ngokuvamile kubandakanya ukungena emzimbeni womunye umuntu ngomunye, izikhundla zocansi zivame ukubandakanya ezocansi zokungena noma ezingangeni.
Izigaba ezintathu zokuya ocansini zivame ukwenziwa: ukuya ocansini (okubandakanya ukungena kwesitho sangasese sowesifazane), ukungena ezimpundu, kanye nobulili bomlomo (ikakhulukazi ukuvuselela umlomo ngomlomo) .Izenzo zocansi zingabandakanya nezinye izinhlobo zokukhuthaza izitho zangasese, njenge-solo noma ukushaya indlwabu , okungabandakanya ukuxubha noma ukungena ngokusebenzisa iminwe noma izandla noma ngethuluzi (ithoyizi locansi), njenge-dildo noma isidlidlizi. Lesi senzo singafaka futhi i-anilingus. Kunezikhundla eziningi zocansi abahlanganyeli abangazamukela kunoma yiziphi zalezi zinhlobo zocansi noma izenzo; abanye ababhali baphikise ukuthi inani lezikhundla zocansi alinamkhawulo.
1 Inani lezikhundla nemiphumela kumakhono omzimba
2 Ucansi njengeQembu
Inani lezikhundla nemiphumela kumakhono omzimba[hlela | Hlela umthombo]
Ngo-1974, u-Alex Comfort wahlukanisa ngaphezu kuka-600 kwathi uGershon Legman wahlukaniswa waba ngama-3,780. Kodwa-ke, kunesiphakamiso sokuthi inani lezikhundla ezingasetshenziswa kwezocansi alinamkhawulo.
Abanye abantu banqunyelwe ukukhubazeka ngokomzimba ezindaweni zobulili abangazisebenzisa ngaphandle kobuhlungu noma okunye ukungaphatheki kahle. Okunye ukukhawulelwa ngokomzimba komunye noma bobabili ababambiqhaza futhi kukhawulela izikhundla zobulili abangazamukela. Isibonelo, isikhundla sezinkezo sinconywa lapho noma yimuphi umlingani enezinkinga zasemuva; isikhundla se-starfish sinconyelwa ukufeza ama-orgasms kalula futhi isikhundla sezithunywa zevangeli singahle singakhululeki kumlingani otholayo uma isisindo somlingani ofaka, esihlobene nesomlingani otholayo, siyinkinga. Futhi, izikhundla zokuma zingafaneleki uma kunomehluko omkhulu wokuphakama phakathi kwabahlanganyeli, ngaphandle kwalapho kuthathwa owesifazane.
Ucansi njengeQembu[hlela | Hlela umthombo]
Abantu bangabamba iqhaza ebulilini beqembu. Ngenkathi ukuya ocansini kweqembu kungasho ukuthi bonke ababambiqhaza kumele bahlanganyele ezocansi nabo bonke abanye ngasikhathi sinye, ezinye izikhundla zingenzeka kuphela ngabantu abathathu noma ngaphezulu.
Njengalezi zikhundla ezibalwe ngenhla, izikhundla eziningi zocansi lwamaqembu ziyasebenza uma kusetshenziswa ifenisha evusa inkanuko.
Lapho abantu abathathu beya ocansini omunye nomunye, kubizwa ngokuthi yi-threesome. Izindlela ezingaba khona zokuba nabo bonke abalingani ocansini ngamunye zifaka phakathi kokulandelayo:
•Umuntu oyedwa wenza ucansi lomlomo kumlingani oyedwa ngenkathi behlanganyela ocansini olwamukelayo noma lobulili nomunye lo mlingani. Kwesinye isikhathi kuthiwa yi-spit roast.
•Isikhundla esingu-369 kulapho abantu ababili benza ucansi lomlomo endaweni engama-69 ngenkathi umuntu wesithathu ezibeka yena ukuze angene kokunye; imvamisa owesilisa ozibandakanya ocansini nesitayela se-doggie nowesifazane phezulu endaweni ye-69
•Indoda iya ocansini lwesitho sangasese sowesifazane noma sangasese nomlingani oyedwa, kuyilapho yona ingenwa ngomunye umuntu (mhlawumbe nge-strap-on dildo).
•Abalingani abathathu balale noma bame ngokufana, omunye phakathi kwabanye ababili. Kwesinye isikhathi kubizwa isamishi. Leli gama lingabhekisa ngqo ekungeneni kabili kowesifazane, onepipi elilodwa endunu yakhe, kanti elinye lisesiswini sakhe noma kowesilisa, elinemithondo emibili endunu yakhe.
•Abahlanganyeli ababili baya ocansini lwesitho sangasese sowesifazane / sangasese, futhi oyedwa / bobabili benza ucansi lomlomo engxenyeni yesithathu.
•Abantu abathathu benza ucansi lomlomo / lwesitho sangasese sowesifazane / sangasese ngasikhathi sinye, okuvame ukubizwa ngokuthi uchungechunge lwe-daisy.
•Igama lesitsotsi unhlanhla Pierre kwesinye isikhathi lisetshenziswa uma kubhekiswa kumuntu odlala indima ephakathi kwabathathu, engenwa nge-anally ngenkathi enza ucansi lwendunu lokungena noma lwesitho sangasese sowesifazane.
I-469 yindawo yabantu abane yocansi lapho abantu ababili benza ucansi lomlomo olungu-69 kanti umuntu wesithathu nowesine bobabili bazibeka ohlangothini ngalunye ukuze bangene kulaba bobabili ababandakanyeka ocansini lomlomo ngasikhathi sinye; ifana ne-369, ngokungezwa komuntu wesine.
Lezi zikhundla zinganwetshwa ukuze zamukele noma yiliphi inani labahlanganyeli:
•Iqembu labesilisa elishaya indlwabu libizwa ngokuthi yindilinga.
•Iqembu labesilisa elishaya indlwabu futhi likhipha umchamo ebusweni bomuntu oyedwa laziwa ngokuthi yi-bukkake.
•Iqembu lamadoda, abesifazane, noma bobabili, ngamunye enza ucansi lomlomo komunye nomunye, ngokuhleleka okuyindilinga, kuyinketho emnandi.
•Lapho owesifazane oyedwa noma owesilisa enikezwa ukunakwa okulandelanayo noma okufanayo kwabaningi, okuvame ukubandakanya ulayini (ukudonsa isitimela), kuvame ukubizwa ngokuthi yiqembu lezigelekeqe.
Umuntu angafakwa ngokocansi izikhathi eziningi ngasikhathi sinye. Ukungena kungabandakanya ukusetshenziswa kweminwe, izinzwane, amathoyizi ocansi, noma ipipi. Izigcawu zokungena okuningi zivamile ezithombeni ezingcolile.
Uma umuntu oyedwa engenwa yizinto ezimbili, kubizwa ngokujwayelekile ukuthi ukungena kabili (DP). Ukungena kabili kwesitho sangasese sowesifazane, indunu noma umlomo kungabandakanya:
•Ukungena ngasikhathi sinye kwe-anus ngamapipi amabili noma ezinye izinto. Lokhu kuvame ukubizwa ngokungena kabili kwe-anal (DAP) noma ukugxusha okuphindwe kabili.
•Ukungena ngasikhathi sinye kwesitho sangasese sowesifazane ngamapipi amabili noma ezinye izinto. Lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi ukungena kwesitho sangasese sowesifazane kabili (i-DVP) noma ukugxusha okuphindwe kabili.
•Ukungena kanyekanye kwesitho sangasese sowesifazane kanye nendunu.Uma lokhu kwenziwa kusetshenziswa imithondo kanye / ne-strap-on dildos, kwesinye isikhathi lokhu kubizwa nge-sandwich noma i-BigMac. I-shocker (bheka ngenhla) ikwenza lokhu isebenzisa iminwe eminingana yesandla esisodwa.
•Ukungena kanyekanye komlomo noma kwesitho sangasese sowesifazane noma kwendunu. Uma izinto ezingena ngaphakathi zingama-penises, lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi ukosa okhafula amathe, isicupho somunwe waseChina, noma umbhoshongo we-Eiffel.
Okungenayo[hlela | Hlela umthombo]
Lezi zikhundla zibandakanya ukufakwa kwento (yezitho zobulili) (njengepipi, i-strap-on dildo, ipulagi, noma enye into (izinto) engafakwanga ebufazini, endunu noma emlonyeni.
UKusetshenziswa ifenisha noma okokusebenza okukhethekile
Izenzo eziningi zocansi zivame ukwenziwa embhedeni noma kwenye ipulatifomu elula. Njengoba uhla lwezisekeli lutholakala, kanjalo nohla lwezikhundla ezingenzeka. Ifenisha ejwayelekile ingasetshenziselwa le njongo. Futhi, izinhlobo ezahlukahlukene zefenisha evusa inkanuko nezinye izinto ezifana nokushaywa kwezinsimbi kanye nezicupho zisetshenziselwe ukwenza lula ezikhundleni zobulili ezingavamile kakhulu.
Izikhundla zokukhuthaza noma zokuvimbela ukukhulelwa
Ukukhulelwa kungumphumela ongaba khona wanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi wezocansi lapho isidoda sihlangana khona nesitho sangasese sowesifazane; lokhu kuvame ukwenzeka ngesikhathi socansi lwesitho sangasese sowesifazane, kepha ukukhulelwa kungavela ocansini lwangemuva, ocansini lwedijithali (ukuthwalwa ngomunwe), ucansi lomlomo, noma ngenye ingxenye yomzimba, uma isidoda sidluliswa sisuswa endaweni eyodwa siye esithweni sangasese sowesifazane ovundile nowesilisa ovundile. Abesilisa nabesifazane ngokuvamile bavundile ngesikhathi sokuthomba. Yize izikhundla ezithile zocansi kukholakala ukuthi ziveza imiphumela emihle kakhulu kunezinye, azikho kulezi zindlela ezisebenzayo zokuvimbela inzalo.
Umlingani ongena ngaphambili
Isikhundla sobulili esisetshenziswa kakhulu isikhundla sezithunywa zevangeli. Kulesi sikhundla, ababambiqhaza babhekana. Umlingani owamukelayo ulele ngomhlane ngemilenze ehlukene, kuyilapho umlingani ongena ngaphakathi elele ngaphezulu. Lesi sikhundla nokuhluka okulandelayo kungasetshenziselwa ucansi lwangasese noma lwendunu.
Umlingani ongena ngaphakathi umi phambi kozakwethu otholayo, onyawo lakhe lilengayo onqenqemeni lombhede noma elinye ipulatifomu njengetafula.
Njengoba imilenze yomlingani owamukelayo iphakanyiselwe ophahleni futhi iphumula ibhekene nozakwethu ongena, lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi isikhundla sevemvane. Lokhu kungenziwa futhi njengokuguqa.
Umlingani otholayo ulele ngomhlane. Umlingani ongena ngaphakathi uyama futhi aphakamise isifuba sozakwethu esamukelayo ukuze singene. Okuhlukile ngukuthi umlingani owamukelayo abeke imilenze yakhe emahlombe omlingani ongene.
Umlingani owemukelayo ulele ngomhlane, imilenze ikhuphuke iqonde kanye namadolo eduze kwekhanda. Umlingani ongena ngaphakathi ubamba imilenze yalowo amukelayo futhi angene ngenhla.
Ngokufanayo nokuma kwangaphambilini, kepha imilenze yalowo owemukelayo akudingeki ukuthi iqonde futhi umlingani ongena ngaphakathi asonge izingalo zakhe kuzakwethu owamukelayo ukusunduza imilenze eduze ngangokunokwenzeka esifubeni. Ubizwa ngokuthi yi-stopperage ekuhumusheni kukaBurton kweThe Perfumed Garden.
Inqubo yokuqondanisa kokuhlangana, isikhundla lapho owesifazane engenwa khona ngowesilisa yindoda, bese kuthi umlingani ongena phakathi anyukele phezulu emzimbeni womuntu wesifazane kuze kube yilapho ipipi likhomba phansi, uhlangothi olungasemuva lomthondo manje seluzihlikihla ku-clitoris.
Umlingani owamukelayo uwela izinyawo ngemuva kwekhanda (noma okungenani ubeka izinyawo zabo ezindlebeni zazo), ngenkathi elele ngomhlane. Uzakwethu ongena lapho ubamba umlingani owemukelayo ngokuqinile azungeze i-instep noma iqakala ngalinye bese elala kubude obugcwele bomlingani otholayo. Ukwahluka ngukuthi umlingani owemukelayo awelele emaqakaleni abo esiswini, emadolweni emahlombe, bese umlingani ongena ngaphakathi alale emaqakaleni awele umlingani owamukelayo ngesisindo sabo esigcwele. Ebizwa nge-oyster yaseViennese yiNjabulo Yezocansi.
Eziningi zalezi zikhundla zingasetshenziselwa ukungena kwesitho sangasese sowesifazane noma umsunu.
•Umlingani ongena ngaphakathi uhlala endaweni engaphezulu, imilenze yeluliwe. Umlingani owamukelayo uhlala phezulu bese esonga imilenze yakhe kuzakwabo ongena ngaphakathi. Ubizwe ukushaya khona lapho ekuhumusheni kukaBurton kweThe Perfumed Garden. Uma umlingani ongena ngaphakathi ehlala ezinyaweni ezinqamulelayo, ibizwa ngokuthi indawo ye-lotus noma imbali ye-lotus. Isikhundla singahlanganiswa nokuthotshwa kwezindawo ezine-erogenous.
•Uzakwethu ongena ngaphakathi uhlala esihlalweni. Umlingani otholayo unqamula umlingani ongena ngaphakathi futhi uhlala, abheke kumlingani ongena ngaphakathi, izinyawo phansi. Lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi umdanso wethanga, okunephutha ngandlela thile njengoba umdanso wethanga uqobo ungabandakanyi ukungena. Umlingani owemukelayo naye angahlala emuva, umhlane wabo uye kumlingani ongena ngaphakathi.
•Umlingani ongena ngaphakathi uhlala kusofa noma esihlalweni esinendawo yokubamba izingalo. Umlingani owamukelayo uhlala ethangeni lomlingani ongene, ngokuqondakalayo kozakwethu ongena, ngomhlane wabo ubhekene ne-armrest.
•Uzakwethu ongena ngamadolo uguqa ngenkathi umlingani owamukelayo elele ngomhlane, amaqakala ohlangothini ngalunye lwamahlombe kazakwethu ongena.
Eziningi zalezi zikhundla zingasetshenziselwa ukungena kwesitho sangasese sowesifazane noma umsunu. Lapho umlingani otholayo kungowesifazane, lezi zikhundla kwesinye isikhathi zibizwa ngowesifazane phezulu, noma izikhundla zezinkomo.
Isici salezi zikhundla ukuthi umlingani ongena ngaphakathi ulele ngomhlane nozakwethu owamukelayo ngaphezulu:
Umlingani owamukelayo angaguqa ngenkathi egudla umlingani ongena ngaphakathi, ababambiqhaza babhekane.
Ngenye indlela, umlingani otholayo angabhekana nomlingani ongena ngaphakathi. Lesi sikhundla kwesinye isikhathi sibizwa ngokuthi yi-reverse cowgirl position.
Umlingani owamukelayo angabuyela emuva ngezandla phansi.
Umlingani owamukelayo angacasula (esikhundleni sokuguqa) ebheke kumlingani ongena ngaphakathi.
Umlingani owamukelayo angaletha amadolo akhe phansi.
Umlingani ongena ngaphakathi ulele ngomhlane ongaphezulu etafuleni eliphansi, kusofa, esihlalweni noma onqenqemeni lombhede, ukugcina izinyawo zabo ziyisicaba phansi futhi emuva zihambisana naphansi. Umlingani owemukelayo ubabhodloza, futhi ugcina nezinyawo zabo phansi. Uzakwethu owamukelayo angathatha noma iziphi izikhundla ezahlukahlukene.
Isikhundla sokubambisana saphakanyiswa nguMasters noJohnson, futhi sancanyelwa yizingxenye ezintathu kwezine zabahlanganyeli besifundo sobulili obuhlukile ngemuva kokukuzama. Lesi sikhundla sifaka owesilisa emhlane, kuthi owesifazana agingqike kancane eceleni ukuze isinqe sakhe sibe ngaphezulu, kepha isisindo sakhe siseduze nesakhe.Lesi sikhundla singasetshenziselwa nokungena endunu, futhi asigcini ngokulingana nabobulili obuhlukile
Eziningi zalezi zikhundla zingasetshenziselwa ukungena kwesitho sangasese sowesifazane noma umsunu. Esimweni sokuma esiyisisekelo, bobabili abalingani bame babhekane. Ukwehluka okulandelayo kungenzeka:
•Ekumeni okuyisisekelo, bobabili abalingani bayama babhekane futhi bahlanganyele ocansini lwesitho sangasese sowesifazane. Ukuze kufane nokuphakama, umlingani omfishane, ngokwesibonelo, angama ezitebhisini noma agqoke izithende eziphakeme. Kungaba lula ukugcina ukuqiniswa okuqinile uma owesifazane efulathele udonga. Ngokusekelwa okunjalo, uKama Sutra ubiza lesi sikhundla ngokuthi yiCongress Emisiwe. Lesi sikhundla sisetshenziswa kakhulu ezindaweni ezimile, njengodonga lwasekamelweni noma eshaweni.
•Uzakwethu ongena ngaphakathi umile, kuthi lo owemukelanayo asonge izandla zakhe entanyeni yakhe, nemilenze yakhe ayibeke okhalweni lwakhe, ngaleyo ndlela aveze isitho sangasese sowesilisa . Lesi sikhundla senziwa lula ngokusetshenziswa kwento eqinile ngemuva kotholi, njengoba ngenhla. Ukuthatha lesi sikhundla, kungaba lula ukuqala ngophathina owamukelayo olele ngomhlane onqenqemeni lombhede; umlingani ongena ngaphakathi ubeka izindololwane zakhe ngaphansi kwamadolo abo, angene kuzo, bese eziphakamisa njengoba esukuma eme endaweni ethile. EJapan, lokhu kubizwa ngokuthi indawo ye-Ekiben, ngemuva kwebhokisi elithile lesidlo sasemini elithengiswa eziteshini zezitimela.
•Ngenye indlela, umlingani otholayo angabhekana nomlingani ongena ngaphakathi ovumela ucansi lwendunu. Lesi sikhundla siyehluka ngokuba umlingani owamukelayo athathe izikhundla ezahlukahlukene zokuma. Isibonelo, zingaguqa okhalweni, zibeke izandla noma izindololwane etafuleni.
Eziningi zalezi zikhundla zingasetshenziselwa ukungena kwesitho sangasese sowesifazane noma umsunu. Izinhlobonhlobo zesitayela senja noma isikhundla semfundiso zihlanganisa:
•Umlingani otholayo ukuzo zonke izinyawo ezine-torso yazo enezingqimba futhi umlingani ongena ngaphakathi afaka ipipi noma ithoyizi lakhe locansi kungasese noma endunu ngemuva.
•Isifuba sozakwethu esitholayo sibheke phansi bese umlingani ongena ngaphakathi aziphakamisela okhalweni ngaphezu kwalolo lozakwethu angena kulo kakhulu.
•Umlingani ongena ngaphakathi ubeka izinyawo zakhe ohlangothini ngalunye lozakwethu otholayo ngenkathi egcina amadolo egobile futhi ephakamisa kahle ngangokunokwenzeka ngenkathi egcina ukungena. Izandla zomlingani ongena ngokuvamisile kufanele zibekwe emhlane womlingani owamukelayo ukuze angawi phambili.
•Umlingani owamukelayo uguqa ame ngezinyawo ngenkathi umlingani ongena ngaphakathi edonsela izingalo zalowo owemukelayo emuva ezihlakaleni ezibheke kubo.
Esimweni sezipuni bobabili abalingani balale ngohlangothi, babheke ngakuyo leyo ndlela. Izinhlobonhlobo zale nqubo zifaka okulandelayo:
●Umlingani otholayo ulele ngohlangothi lwabo. Umlingani ongena ngaphakathi uyaguqa angene ngemuva. Ngenye indlela, uzakwethu ongena ngaphakathi angama uma umlingani owemukelayo ephezulu.
●Umlingani otholayo ulele ubheke phansi, mhlawumbe imilenze yabo isakazekile. Umlingani ongena ngaphakathi ulele phezu kwabo.Ukubekwa komcamelo ngaphansi kwezinqe zomlingani owamukelayo kungasiza ekwandiseni ukukhuthazeka kulesi sikhundla.
●Umlingani owamukelayo ulele ubheke phansi, amadolo ndawonye.Uzakwethu ongena ngaphakathi ulele phezulu ngemilenze evulekile.
●Uzakwethu otholayo ulele ngohlangothi umlenze wabo ongaphezulu phambili.Uzakwethu ongena ngaphakathi uguqa phansi umlenze ophansi kakhulu womamukeli.
Izikhundla ngesikhathi sokukhulelwa
Umgomo ukuvimbela ukucindezela ngokweqile esiswini nokuvimbela ukungena njengoba kufunwa ngabalingani abathile. Ezinye zezikhundla ezingezansi yizikhundla ezithandwayo zocansi ngesikhathi sokukhulelwa.
Owesifazane phezulu: ususa ingcindezi esiswini sowesifazane futhi amvumele ukuthi alawule ukujula nobuningi bokuqhutshwa.
Owesifazane emuva: njengesithunywa sevangeli, kepha enengcindezi encane esiswini noma esibelethweni. Owesifazane ulele ngomhlane futhi uphakamisa amadolo akhe abheke esifubeni sakhe. Uzakwethu uguqa phakathi kwemilenze yakhe angene ngaphambili. Umcamelo ubekwa ngaphansi kwesansi sakhe ukuze uthole induduzo eyengeziwe.
Emaceleni: futhi kugcina ingcindezi isisu sakhe ngenkathi isekela isibeletho sakhe ngasikhathi sinye.
Spooning: izikhundla ezithandwa kakhulu ongazisebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa sekwedlule isikhathi; ukuvumela ukungena okungajulile kuphela nokuqeda ukucindezela esiswini.
Ukuhlala: uphakamisa umlingani ohlezi, akhulule isisu sengcindezi.
Ukusuka ngemuva: ukumvumela ukuthi asekele isisu namabele.
•Uzakwethu otholayo ungaphansi. Uzakwethu ongena ngaphakathi ulele ngaphezulu ngokungathi kubo.
•Umlingani ongena ngaphakathi ulele ngomhlane, imilenze isakazekile. Umlingani owemukelayo usemhlane wabo ngaphezulu komuntu ongena ngaphakathi, imilenze isakazekile, ibheke kolunye uhlangothi.
•Obengenayo nowemukelayo balala ngomhlane, amakhanda akhomba kude. Ngamunye ubeka umlenze owodwa ehlombe lomunye (njenge-brace) nomunye umlenze uphumele eceleni.
•Umlingani otholayo ulele ngomhlane kanti umlingani ongena ungene ulele ubheke ngamehlo. Umlingani owemukelayo ugoba idolo eliseduze kwekhanda likazakwethu ongene ngokwanele ukuze kube nendawo yokuthi ukhalo lowalingani ongene lungene ngaphansi kwalo, kuyilapho imilenze yomlingani ongene ingene komunye umlenze womlingani owamukelayo. Isenzo sokungenisa nokuphuma sizohamba kakhulu sihambisane nohlangothi kunase-eksisi ephezulu kuya phansi. Lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngesikhundla sesikele. Lesi sikhundla sivumela ukuvuselelwa kwamabele ngesikhathi socansi, ukuthi abalingani bakwazi ukugcina ukuthintana kwamehlo uma befisa, kanye nombono omuhle wabo bobabili abalingani njengoba befinyelela ku-orgasm.
•Uzakwethu ongena ngaphakathi uhlala onqenqemeni lombhede noma esihlalweni izinyawo zisabalele phansi. Umlingani otholayo ulele ngomhlane phansi bese egoqa imilenze namathanga akhe phezu kwemilenze yalowo ongena naye. Uzakwethu ongena ngaphakathi ubamba amadolo kazakwethu owamukelayo futhi ulawula ukuqhuma.
Izikhundla zobulili bomlomo
Ukuya ocansini ngomlomo ukugqugquzela izitho zangasese ngomlomo. Kungaba okungena ngaphakathi noma okungangeni, futhi kungenzeka ngaphambi, phakathi, noma, noma ngokuya ocansini. Kungase futhi kwenziwe ngasikhathi sinye (ngokwesibonelo, lapho omunye uzakwethu enza i-cunnilingus, ngenkathi omunye enza i-fallatio), noma umlingani oyedwa kuphela angenza komunye; lokhu kudala inqwaba yokwahluka.
IFellatio ucansi lomlomo olwenziwa emthondweni Izikhundla ezingenzeka zifaka:
Owamukelayo ulele ngomhlane ngenkathi umlingani eguqa phakathi kwemilenze yakhe.
Umamukeli ulele ngomhlane ngenkathi umlingani elele eceleni kwemilenze yabo.
Owamukelayo uhlala esihlalweni umlingani eguqa phambi kwabo phakathi kwemilenze yabo.
Umamukeli umi ngenkathi umlingani eguqa phambi kwabo noma ehleli (esihlalweni noma onqenqemeni lombhede, njll.) Bese eguqa phambili.
Owamukelayo umile ngenkathi umlingani, naye emi, egoba phambili okhalweni.
Umamukeli umi noma uqoshama onqenqemeni lombhede, ubheke embhedeni. Uzakwethu osebenzayo ulele embhedeni ikhanda labo lilenga onqenqemeni lombhede ubuyela emuva. Umamukeli ufaka ipipi lakhe emlonyeni womlingani, imvamisa ukufeza ukungena komphimbo ojulile.
Ngenkathi umlingani osebenzayo elele ngomhlane, owemukelayo uthatha isikhundla sobuthunywa bevangeli kepha wahlelela phambili.
Uzakwethu osebenzayo (onamabele) ulele ngomhlane, futhi owemukelayo ufaka ipipi labo phakathi kwamabele, nasemlonyeni.
ICunnilingus ucansi lomlomo olwenziwa esithweni sangasese sowesifazane. Izikhundla ezingenzeka zifaka:
•Umamukeli ulele ngomhlane njengasesikhundleni sezithunywa zevangeli. Umlingani osebenzayo ulele ngaphambili kwabo phakathi kwemilenze yabo.
•Uzakwethu osebenzayo uhlala. Umamukeli umi ubheke kude futhi ugoba okhalweni.
•Uzakwethu osebenzayo uhlala. Owamukelayo umile noma ama-squats abheke ngakumlingani futhi angamgodla emuva, ukuze enze okunye ukukhuthazeka.
•Umlingani osebenzayo ulele ngomhlane ngenkathi umamukeli eguqa ngemilenze ezinhlangothini zabo kanye nezitho zabo zobulili emlonyeni. Ngamanye amagama, umamukeli uhlala ebusweni bomlingani wakhe.
•Umamukeli uhlala kuzo zonke izinyawo ezine njengokuma kwesitayela senja. Uzakwethu ulele ngomhlane nekhanda ngaphansi kwesitho sangasese. Izinyawo zazo zingase zisuke embhedeni futhi zihlale phansi.
•Owamukelayo uzisebenzisela izitho zangasese. Yize kuyivelakancane, abanye abantu basathola lokhu kungenzeka bheka i-autofellatio.
•Umamukeli umi, mhlawumbe ukuziqinisa odongeni. Umlingani osebenzayo uguqa phambi kwabo.
•Umemukeli uhlala embhedeni naye evulekile, umlingani osebenzayo uguqa phambi kwabo.
•Owamukelayo ubheke phansi (emi ngezandla, ebanjwe nguzakwethu, noma esebenzisa ukwesekwa, okufana nobugqila noma ifenisha), lapho umlingani osebenzayo emi noma eguqa (kuya ngokuphakama) ngaphambili noma ngemuva. Ukuma okunjalo kungaba nzima ukukufeza, noma ukukugcina isikhathi eside, kepha ukushesha kwegazi ebuchosheni kungaguqula umphumela wokuvuselela.
•Umamukeli umi ngezandla, uphumuza umlenze ngamunye ngapha nangapha kwekhanda lozakwethu osebenzayo, umlingani osebenzayo emi noma eguqile ebheke kubo. Ngokuya ngokuthi umamukeli ubheke ngakuphi, ukukhuthazeka okuhlukile namazinga enduduzo angatholakala.
Ukuya ocansini ngomlomo ngasikhathi sinye
Ukuya ocansini ngomlomo ngasikhathi sinye phakathi kwabantu ababili kubizwa nge-69. Ozakwethu bangaba ngabesifazane noma abesilisa. Bangalala bendawonye, balale omunye phezu komunye, noma bame nomlingani oyedwa bebambe omunye babheke phansi.
Izikhundla ze-anilingus, ezaziwa nangokuthi ukukhothwa kwomsunu, rimming, anal-oral sex, rimjob, noma ukuphonsa isaladi, kuvame ukuhluka kulabo abaya ocansini ngomlomo. U-Anilingus angenziwa ezindaweni eziningi zocansi kufaka phakathi:
•Umlingani ongenzi lutho ukuzo zonke izinyawo ezisesimweni sokufundisa nozakwabo osebenzayo ngemuva.
•Umlingani ongenzi lutho usemhlane wabo endaweni yezithunywa zevangeli nemilenze yabo iphakeme.
•Uzakwethu ongenzi lutho phezulu endaweni engu-69.
•I-trombone egqwalile, lapho owesilisa emi khona lapho umlingani osebenzayo enza i-anilingus ngemuva, imvamisa isuka lapho uguqa khona, futhi wenza nokushaya indlwabu kumlingani omile, ngaleyo ndlela kufane nomuntu odlala i-trombone.
Iminwe yesitho sangasese sowesifazane, isitho sangasese noma indunu.
I-Shocker: ukunwebeka ngasikhathi sinye kwesitho sangasese sowesifazane kanye nendunu usebenzisa isandla esisodwa. Inkomba nomunwe ophakathi kufakwa esithweni sangasese, kanye no-pinky endunu. Ukwehlukahluka okuningi kungenzeka ngokusebenzisa inhlanganisela yeminwe ehlukahlukene ku-orifice ngayinye.
Ukushaya: ukufaka sonke isandla esithweni sangasese noma endunu. Lokhu ngokuvamile kudinga inani elikhulu lokugcoba nokuphumula. Isandla imvamisa asenziwanga isibhakela, kepha kunalokho isithupha sibekwa phakathi kweminwe ephakathi nendawo nendandatho. Ukushaya kungadala ukusikeka noma ukugcotshwa kwesitho sangasese sowesifazane, i-perineum, i-rectum, noma i-colon, okuholele ekulimaleni kanzima nasekufeni.
Izincwajana zezocansi zivame ukuletha umhlahlandlela wezikhundla zocansi. Izincwadi zocansi zinomlando omude. Esikhathini se-Graeco-Roman, incwadi yezocansi yabhalwa nguPhilaenis waseSamos, okungenzeka ukuthi i-hetaira (courtesan) yenkathi yamaGreki (ikhulu lesi-3 kuya kwele-1 leminyaka BC) I-Kama Sutra yaseVatsyayana, okukholakala ukuthi yabhalwa ngo Ikhulu le-6th, linedumela elaziwa njengebhukwana lezocansi. Izikhundla ezahlukahlukene zocansi zibangela umehluko ekujuleni kokungena kwezocansi kanye ne-angle yokungena. Miningi imizamo eyenziwe yokuhlukanisa izikhundla zocansi. U-Alfred Kinsey uhlukanise izikhundla eziyisithupha zamabanga aphansi, Umbhalo wakudala wasendulo waseYurophu owanikezelwa ezikhundleni zocansi yiSpeculum al foderi, kwesinye isikhathi eyaziwa ngokuthi yi "The Mirror of Coitus" (noma ngokwezwi nezwi "isibuko samaFuckers"), kwatholakala umbhalo waseCatalan wekhulu le-15 ngawo-1970.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Izitayela_zocansi&oldid=88311" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-22 uNtulikazi 2021, nge-20:19.